Yakakwira-Yemhando ST-350 CO2 Laser System Mugadziri uye Mutengesi | Smedtrum
Vane Simba asi Vanyoro, Kune Iwo Akadzika Mavanga
Ko CO2 Laser Inoshanda Sei?
CO2inogona kuburitsa laser mwenje we10600 nm wavelength, iyo inonwiswa zviri nyore nemvura munyama yeganda. Nekutora simba re CO2laser, mvura iri munyama yakanangwa inosvika panotonhora uye ichikonzera kubuda kwemhepo munzvimbo yakanangwa. Naizvozvo, iyo CO2 Laser iri zvakare muboka mu "ablative Laser." Nokusimuka kwemvura munzvimbo yakanangwa, zvinyama zveganda zviri padyo zvinotora kumwe kupisa uye zvinoumbana kumisa kubuda kweropa. Kune rimwe divi, iyo yekumusoro inosimudzira inoenda yakadzika mukati meganda redhisheni uye inomutsa kuumbwa kweiyo collagen nyowani, nekudaro inovandudza ganda uye inobvisa mavanga zvinobudirira.
Chinyorwa cheRinyore Kushanda
ST-350 CO2Laser Sisitimu inouya ichitsemurwa ruoko chidimbu chine gwapa saizi 20mm * 20mm. Iyo Beam inoburitswa kunze mune yakawanda-yakabatana ruoko iyo inogonesa mushandi kuti ashande akasununguka.
Iyo Fractional maitiro inopa akasiyana mapatani
Iyo fractional modhi ye ST-350 CO2Laser Sisitimu inovimbisa kuti laser inogona kugadzira akasiyana maumbirwo anosanganisira denderedzwa, mativi, mativi matatu, hexagon zvichingodaro. Zvakare, ST-350 inotsigira yemahara dhizaini modhi, inoita kuti iwe utore chimiro chakasarudzika zvichienderana nenzvimbo yekurapa dzakasiyana.
Yakakwira Spot Density
Kune huwandu hwenzvimbo, isu tine gumi nemaviri emazinga esarudzo, kubva pa25 kusvika 3025 PPA / cm2. Iyo yakasarudzika yekushomeka kwenzvimbo inogona kuiswa mune dzakasiyana derma mamiriro.
Ultra-ipfupi Pulse Nguva
Iyo nguva yekushomeka inoderedza kusvika ku1.0ms, iyo inogona kuwedzera kuchengetedzeka kwekurapwa. Zvakare, nematanho mana ekusarudzwa, ST-350 uye ST-350 inopa akasiyana musanganiswa wemarudzi akasiyana ekurapa.
● Kugadzirwa kwemavanga: acne acne, vanga rekutsva, vanga rakanyura, vanga rekuvhiya, nezvimwe.
● Kuderedzwa kwemakwenzi: tsoka dzegunguwo, huma makwinya, mitsara yakaunyana, mitsara yekunyemwerera, mitsara yakanaka, ganda kureruka, kutwasuka, nezvimwe.
● Zvipembenene zvine mavara: dyschromia, nevus, freckles, warts, nezvimwe.
● Ganda kumutsazve: hombe pore, isina kuenzana kugadzirwa, rakaomarara ganda, rakasviba ganda, kukuvara kwechiedza, nezvimwe.
● Dermal maronda: syringoma, condyloma, seborrheic, nezvimwe.
● Kucheka & kucheka
Simba 35W 55W
Pulse Upamhi mashoma 0.1 ms / dot
Pulse Density 25 kusvika 3025 PPA / cm2
Saizi saizi 20mm * 20mm mune akawanda maumbirwo uye inobvumira yemahara kudhirowa
Pashure: ST-250 Fiber Laser System
Zvadaro: ST-690 IPL Sisitimu
CO2 Laser Midziyo
CO2 Laser Kuvhiya